Mövenpick Hotels & Resorts na-eweghachite njem nlegharị anya nke Tunisia na akụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia » Mövenpick Hotels & Resorts na-eweghachite njem nlegharị anya nke Tunisia na akụ
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia
Ndị njem nleta-na-ese foto-na-ogbe ndịda-Tunis
Nke a bụ afọ nke mgbake n'ezie maka ụlọ ọrụ ndị njem na Tunisia. Elọ nkwari akụ na ebe ntụrụndụ Moevenpick taa kwuru na ọ na-edochi ebe o siri ike na Tunisia na iweghara ụlọ nkwari akụ nke oge a na Sfax n'ụsọ oké osimiri. Hospitallọ ọrụ ụlọ ọrụ Switzerland nabatara nkwekọrịta na Société Touristique du Sud iji jikwaa Plaza Sfax & Spa Hotel, ụlọ akụ dị elu na etiti obodo dị na Rue Khalid Ibn Walid, nke dị nso na Medina akụkọ ihe mere eme. Hotellọ nkwari akụ ahụ bụ njem dị mkpirikpi na ebe mgbakọ ahụ, akara ngosi ọzọ yana MICE, nzukọ na ụlọ ọrụ na-agba ume ga-ele Tunisia anya ọzọ.
Zalọ oriri na ọzaụ Plaụ Plaza Sfax & Spa, Tunis
O yiri ka ụlọ ọrụ ndị njem na Tunisia na-arịwanye elu ọzọ. Mgbe ọtụtụ mwakpo ụjọ na-atụ ụjọ na ebe ndị njem nleta na North Africa Country na-agbasi mbọ ike ịghọ ebe kachasị amasị ndị Europe. N’oge gara aga, ndị Jamani na ndị France chịburu ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa n’obodo a dị na Mediterenian.
"Enwere ezigbo mmụba," Mịnịsta njem na-ahụ maka njem nleta bụ Selma Elloumi Rekik gwara ndị mgbasa ozi AFP izu gara aga. Nọmba ndị ọbịa bịara ọnwa ise mbụ nke 2014, ọkachasị n'ihi ịrị elu ndị Russia na ndị China.
Mwakpo jihadist nke 2015 bibiri ụlọ ọrụ ndị njem na Tunisia. Mwakpo emere na National Bardo Museum na Tunis na ebe ọzọ ebumnuche n'akụkụ osimiri dị na Sousse gburu 59 ndị njem nleta si mba ọzọ na ndị nche Tunisia.
Mana mbata nke ndị ọbịa na afọ a eruola nde 2.3, mmụba nke ihe karịrị 20 pasent site na otu oge n'afọ gara aga na 5.7 pasent dị elu karịa otu oge na 2010.
Elloumi kwuru, sị: “Nke a bụ afọ nke ezigbo mgbake.